Qorsheeye: Hawsha, mashruuca iyo ujeedada raadinta hadafka | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan sahmin doonaa hal codsi oo dheeri ah oo ku saabsan berrinka wax soo saarka isticmaalaha, taasi waa, kuwa sida caadiga ah kacsan, fudud oo toosan barta, ama taasi badanaa waxay ku darsataa qiime sare waxqabadka howlaha maalinlaha ah, ka fogaanshaha carqaladeynta iyo kordhinta wax soo saarka.
Codsigan wuxuu wataa magaca soo socda: «Qorsheeye ».
Kuwa aan arag kuwayaga post la xiriira hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijka wax soosaarka "Wax soo saar sare" o "Wax soo saar wax soo saar leh", waxaan ka tagnay xiriirka hoose si markaa aad u akhriso daabacaddan waxaad u baari kartaa:
Wax soosaarka wax soo saar waa kuuLiis hawleed shaqsiyadeed, shaabad waqtiga iyo codsi maamulaha hawsha ah, oo ku habboon barnaamijyada iyo shaqaalaha kale ee dhijitaalka ah, oo sidoo kale leh is-dhexgal ka jaangooyooyinka Jira, Github iyo Gitlab. Intaas waxaa sii dheer, waa iskudhaf (Linux, MacOS iyo Windows) ujeedkeeda ugu weyna waa in la yareeyo waqtiga dadka isticmaala ay ku qaataan howlaha soo noqnoqda iyo in la helo meel lagu ururiyo dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in lagu qabto shaqo ama hawl gaar ah ." Waxsoosaarka Sare: A To List & Waqtiga Dabagalka App
1 Qorsheeye: Maamulaha Hawsha
1.1 Waa maxay qorsheeye?
1.2 Macluumaadka hadda
1.2.2 Ku rakibida
1.2.3 Sawirada shaashada
Qorsheeye: Maamulaha Hawsha
Waa maxay qorsheeye?
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, waxaa si gaar ah loogu sifeeyey sidan soo socota:
" Waa codsi ah Maamulka Hawsha oo leh taageero Liisaska hawsha waxaana si gaar ah loogu talagalay GNU / Linux."
Halka, kuwooda sifooyinka iyo faa'iidooyinka waxyaabaha soo socda ayaa istaaga:
Waa codsi wax soo saar oo gacan ka geysta sidii loo gaari lahaa ujeeddooyinka adeegsadayaasheeda, iyadoo la fududeynayo la socodka dhammaan howlaha, mashaariicda iyo ujeeddooyinka meel keliya oo fudud.
Waxay u oggolaaneysaa shaqada maxalliga ah, iyo khadka tooska ah, iyada oo lagu waafajinayo koonto Todoist Platform (https://todoist.com/es).
Waxay fududeeysaa qorsheynta mashruuc, iyadoo u oggolaaneysa in howlaha (kuwa badan ama kuwa yar) ee qayb ka ah loo qaybin karo qaybo, laguna fulin karo laguna maamuli karo qaybo.
Waxay leedahay muuqaal muuqaal qurux badan oo xarrago leh oo taageeraya ku darista qoraalada, soo bandhigaya URL-yada, sameynta waqtiyada kama dambaysta ah iyo ku darista tags.
Barnaamijka jadwalkaaga ayaa la jaanqaadi kara qorsheeyaha hawsha si uu u maareeyo dhammaan dhacdooyinkaaga iyo isla-meel wada dhigga hal meel.
Waxay leedahay taageero luuqado badan, oo uu kujiro luuqada Isbaanishka.
Kii ugu dambeeyay nooca haddawaa lambarka 2.6.9 la sii daayay maalmo yar uun ka hor. Nooca ka mid ah astaamaha iyo isbeddelada cusub ee cusub, waxaa ka mid ah tilmaame muuqaal cusub oo lagu ogaanayo haddii mashruuc uu leeyahay mashruuc hoosaad, horumar UX ah oo lagu doonayo in lagu burburiyo ama lagu ballaariyo mashaariic hoosaadyo, miiska shaqada lagu daro qaybaha iyo miisaska, oo lagu daray tarjumaadaha la cusbooneysiiyey. Wixii macluumaad dheeraad ah ee tan waxaad booqan kartaa haddii bogga rasmiga ah ee GitHub.
Maadaama arjiga la heli karo si toos ah loogu rakibo dukaanka internetka oo ka mid ah Dugsiga Hoose ee Distro, iyo kuwa kale iyada oo loo marayo ".Flatpak qaab", waxaan adeegsanay qaabkan ugu dambeeyay, sida ku cad soo socda isku xirka, taasi waa, adoo adeegsanaya amarka soo socda:
Ka dib markii la rakibo, waxaan ku wadi karnaa adoo gujinaya Astaanta Menu Codsiga ama amarka soo socda:
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan «Qorsheeye » waxaa lagu gaari karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Planner», taas oo ah codsi waxtar leh oo xiiso leh Maamulka Hawsha oo leh taageero Liisaska hawsha iyo in si gaar ah loogu talagalay GNU / Linux; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qorsheeye: Codsi loogu talagalay raadinta howlaha, mashaariicda iyo ujeeddooyinka